ဦးပိန်တံတား | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← ရတနာ Hsemee စေတီတော် Complex
ဦးပိန်တံတား အမရပူရတွင်တည်ရှိသည်, မန္တလေးနှင့် Taungthaman ရေကန်၏အလယ်တွင်ဖြတ်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခါးဆစ် 1.2K အတွက်ပြေး.
ဦးပိန်ပြီးနောက်အမည်ရှိခံရဖို့ဂုဏ်သတင်း, အမရပူရ၏မြို့တော်ဝန်, ပတ်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ 1850 နှင့်ကမ္ဘာထဲမှာအရှည်ဆုံးကျွန်းသစ်တံတားဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ 1,000 တံတားကိုထောက်ပံ့သောတိုင်အင်းမှာအဟောင်းနန်းတော်အဆောက်အဦးမှဆင်း salvaged ခဲ့ကြသည် (အင်း).
အဖျား 1 – တံတား၏အနောက်တိုင်းအဆုံးမှာအများအပြားစျေးသိပ်မကြီးတဲ့သေးငယ်တဲ့စက်လှေရှိပါတယ်နေဝင်ချိန်မှာတံတားတစ်ခုပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံအရအိုင်မှအပေါ်ခရီးသွားဧည့်ထဲကယူမှစောင့်ဆိုင်းပြွတ်. အနည်းငယ်ဖြည့်အချိုရည်ဖမ်းပြီး, တစ်လှေငှါး, လှည့်ပတ်နေတဲ့လှော်ရှိသည်နှင့်နေရောင်ကိုတင်ထားရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်း. ထိပ်တန်းဓာတ်ပုံများအဘို့ဖွစျဖို့ကျိန်းသေရာအရပ်ကို.
အဖျား2– ဦးပိန်တံတား Taungthaman ရေကန်၏ shallowest တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတည်ဆောက်. မိုးရာသီပြီးနောက် (ဇွန်လ-အောက်တိုဘာ) သငျသညျအကောင်းအမြင်များရရန်အများအပြားလှေ၏အားသာချက်ယူနိုင်အောင်အိုင်ပြည့်ဝ၏. သငျသညျပူရာသီအတွက်တံတားသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့လျှင် (မတ်လ-မေလ) အဆိုပါစက်လှေအဘို့များစွာသောရေကိုအိုင်အဆင့်ကျဆင်းသွားခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်သင်တံတား၏အနောက်ဘက်အဆုံးအောက်မှာသေးငယ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကွက်အများကြီးမြင်ရပါလိမ့်မည်မဟုတျဘဲ.
သငျသညျကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ Google ကမြေပုံရည်ညွှန်း ဦးပိန်တံတား အမရပူရအတွက် – Google Maps ကို
သငျသညျစစ်ကိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အင်းမှတစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်လုပ်နေကြပါလျှင် (အင်း) ထို့နောက်သေချာသင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အတွက်ဦးပိန်တံတားတို့ပါဝင်သည်အောင်, တစ်ခုခုကိုနေထွက်သို့မဟုတ်နေဝင်ချိန်များအတွက်.